ရှန်းယန် - ဝီကီပီးဒီးယား
အရေးပါသည့် နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပညာရှင် ရှန်းယန်
ရှန်းယန် (/ʃɑːŋ/; တရုတ်: 商鞅; ပင်ရင်: Shāng Yāng), သို့မဟုတ် ဝေ့ယန်း  (တရုတ်: 衞鞅; ပင်ရင်: Wèi Yāng ၊ ကုန်းစွန်း ဟုလည်း အမည် တွင်သူ ( ဝေ့ပြည်နယ်၊ ကျိုးနိုင်ငံတော်; c. 390 – 338 BCE), သည် ရှေးခေတ် တရုတ်ပြည်၏ တိုက်ပွဲနွှဲနေသည့် ကာလဝယ် ချင်ပြည်နယ်မှ နိုင်ငံရေးသမားနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူ၏ မူဝါဒတို့သည် ချင်တိုင်းပြည်ကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် စည်းလုံးညီညွတ်စေ၍ ချင်မင်းဆက်ကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် တရုတ်ပြည် အလုံးကို အနိုင်ယူနိုင်မည့် အခြေခံ အုတ်မြစ်ကို ချပေးခဲ့သည်။ သူ နှင့် သူ၏ နောက်လိုက်တို့သည် သခင်ရှန်း ၏ စာအုပ် ကို ပြုစုရာတွင် ပါဝင်ကြခြင်းဖြင့် တရုတ်တရားဥပဒေ ဟု ခေတ်မီမီ ခေါ်ဝေါ်သော စာအုပ်ကို ပြုစုခဲ့သည်။
၄ ပိုမို ဖတ်ရှုလိုလျှင်
၅ ပြင်ပ လင့်များ
ချင် ၏ နယ်စားကြီး ရှောင် ၏ အကူအညီဖြင့် ရှန်းယန်သည် ဝေ့မှ သူ၏ နိမ့်ကျသော ရာထူးမှ (မိသားစုသည် နန်းတွင်းမှ ဖြစ်သော်လည်း ရာထူးမြင့် မရသေးသောကြောင့်) ထွက်ကာ ချင်တွင် အကြံပေးချုပ် အဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ချင်ပြည်နယ်တွင် သူ၏ များပြားလှသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည် သာမည ချင်ပြည်နယ်ကို စစ်ရေးအရ အင်အားကြီး၍ ဗဟိုအာဏာထိန်းချုပ်မှု အားကောင်းသော တိုင်းပြည်တစ်ခု အဖြစ် ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ချင်ပြည် ၏ တရားဥပဒေကို ပြောင်းလဲမှုများသည်(ထို အချိန်က ချင်ပြည် ၏ ဥပဒေသည် လီခွီ ၏ ဥပဒေကျမ်း အပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထား) စည်ပင်ဝပြောမှုသို့ တွန်းပို့ပေးခဲ့သည်။ အရည်အသွေးအလျောက် ချီးမြင့် မြှောက်စားသည့် သူ၏ အုပ်ချုပ်မှုသည် မြေရှင်ကြီးများ၏ အာဏာကို လျော့ကျစေခဲ့သည်။
မာ့ခ်အက်ဒ်ဝပ်လူးဝစ်သည် ကုန်းစွန်း (ဝေ့ယန်း)၏ စစ်ရေး အပေါ် အလေးထားမှုကို တရုတ်ပြည် မြောက်ပိုင်းတစ်လျှောက် လမ်းမကြီးများကို စနစ်တကျ ဖောက်ထားစေခြင်း နှင့် လယ်ယာမြေများကို စနစ်တကျပိုင်းခြားစေခြင်း တို့အပေါ် ထောက်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ထိုခေတ် အနေနှင့်မူ ခေတ်ရှေ့ပြေးနေဟန် ရှိသော်လည်း ကုန်းစွန်းကို 'ဥပဒေပညာရှင် တစ်ယောက်အနေနှင့်သာမက စစ်ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ပညာရှင် တစ်ဦး' အနေ ဖြင့်ပါ မှတ်ယူနိုင်သည်။ ကုန်းစွန်းသည် ရှန်ယန် မြို့ကို တည်ဆောက်ရာတွင် ကြီးကြပ်ခဲ့သည်။
↑ "Shang". Random House Webster's Unabridged Dictionary.
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ Antonio S. Cua (ed.), 2003, p. 362, Encyclopedia of Chinese Philosophy 
↑ Pines, Yuri, "Legalism in Chinese Philosophy", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), 1.1 Major Legalist Texts, http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/chinese-legalism/
↑ pg 79 of Classical China
↑ Paul R. Goldin, Persistent Misconceptions about Chinese Legalism. p. 18 
↑ John Man 2008. p. 51. Terra Cotta Army.
Zhang, Guohua, "Shang Yang"[လင့်ခ်သေ]. Encyclopedia of China (Law Edition), 1st ed.
Xie, Qingkui, "Shang Yang" Archived9May 2007 at Archive.is. Encyclopedia of China (Political Science Edition), 1st ed.
国史概要 (第二版) ISBN 7-309-02481-8
戰國策 (Zhan Guo Ce), 秦第一
Li Yu-ning, ShangYang's Reforms (M.E. Sharpe Inc., 1977).
Lord Shang (died 338 BC)။
商君書 - Shang Jun Shu။
Works by Yang Shang at Project Gutenberg
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရှန်းယန်&oldid=673901" မှ ရယူရန်
ဘီစီ ၃၃၈ ကွယ်လွန်သူများ
တရုတ်ဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ရိုးရာတရုတ်ဘာသာစကား စာသားပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၁:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။